Jarmalka: Soomaali Xaaskiisa iyo Soddohdiis mindi ku weeraray | KEYDMEDIA ONLINE
Jarmalka: Soomaali Xaaskiisa iyo Soddohdiis mindi ku weeraray
Wargeysyada ugu waaweyn Jarmalka ayaa daabacay dhacdadan murugada leh, si kastaba kuma cusba dhacdooyinkan gudaha Jarmalka.
GERMANY - Nin Soomaali ah oo 39 sanno jir ah ayaa xalay xaaskiisa oo 40 sanno jir ah iyo soddohdiisa oo 66 jir ah Mindi ku dhaawacay koonfurta gobolka Hessen ee dalka Jarmalka.
Kaliya kuma ekaan khaasaraha uu geystay intaas, waxa uu sidoo kale dhaawacay laba qof oo deriskiisa ah.
Arrintan oo durba booliska gaartay ayaa keentay in eedeysanaha ay ku qabteen magaalada Grob-Gerau ee gobolka Hessen, halkaasna ninkii xabado ku fureen, ugu danbeyna isaga oo gargaar caafimaad loo fidinayo ayuu sidaasi ugu geeriyooday rasaastii haleeshay.
Waxaa socda baaritaanno ay wadaan booliska oo ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sababta keentay dagaalka qoyskan ka dhex dhacay. Waxay sidoo kale tilmaameen ciidamada nabadgalyada in ninka meydkiisa lagu sameynayo baaritaan lagu ogaanayo inay horay wax u gaareen iyo in kale.
26 June ee sannadkan ayay aheyd markii nin Soomaali ah magaalada Wuerzburg ee ku dilay saddex qof, halka shan kalena uu gaarsiiyay dhaawac culus, sida ay booliisku sheegeen.